Broadcast Beat Awards မှ @IBCShow သို့လာပါမည်။ # IBC2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ထုတ်လွှင့် @IBCShow လာဆုပေးပွဲ Beat! #IBC2014
အမြဲတမ်းသင်စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်ခဲ့ www.broadcastbeat.com အဆိုပါအသံလွှင့်ဆုပေးပွဲအမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC Show ကိုမှလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် Beat ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်!
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM): "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" လယ်ပြင်၌တိုးတက်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထူးခြားသောတီထွင်မှုများအဘို့သူတို့အားစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည် lauding အားဖြင့်လမ်းဦးဆောင်လမ်းပြနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" အမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့မူရင်း, တည်ဆဲနည်းပညာအပေါ်တိုးတက်မှု၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေနှင့်နည်းပညာကိုမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တစ်ခုတိုးခဲ့ရှိမရှိပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းအမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC ပြရန်စဉ်နှင့်အပြီးရှေ့တော်၌, ဆောင်းပါးများအတွက်အနိုင်ရထုတ်ကုန် (s) ကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု (s) ကိုမည်ဖြစ်သည် Beat! ထို့အပြင်ဆုရရှိသူများနှင့်အများအပြားအမည်စာရင်းတင်သွင်းစက်တင်ဘာလ 1, 2014 အားဖြင့်ဖွင့်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂဇင်းရဲ့အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှု Beat အသံလွှင့်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လွှင့်သည့် 2014 IBC ပြရန်, အဆက်အသွယ်မှာဆုပေးပွဲ Beat:
အယ်ဒီတာ @ broadcastbeat.com
2014 IBC အမ်စတာဒမ် 2014 IBC ပြရန် အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် IBC ဆုပေးပွဲ Beat IBC အမ်စတာဒမ် IBC ဆုပေးပွဲ IBC နယ်သာလန် IBC သတင်းများ IBC ပြရန် IBC Show ကိုအမ်စတာဒမ် IBC Show ကိုဆုပေးပွဲ IBC ပြရန် Daily သတင်းစာ IBC ပြရန်နေ့စွဲများ IBC ပြရန်မဂ္ဂဇင်း IBC Show ကိုနယ်သာလန် IBC ပြရန်သတင်းများ IBC ပြရန်နည်းပညာဆုပေးပွဲ IBC နည်းပညာဆုပေးပွဲ IBC2014 IBCShow 2014-08-26
ယခင်: Matrox 12 မှုကြီးကို Input / Output နှင့်အတူကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာ SDI Card များကိုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Pronology ၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု SaaS စှမျးအတူသတ်မှတ်မည်တိုက်ရိုက် Tapeless Workflows ဆောင်ကြဉ်း